Make Up လိမ်းဖို့ Brush နဲ့ Sponge(ဥ) ဘယ်တစ်ခုက ပိုအသင့်တော်ဆုံးလဲ?
4 Jul 2018 . 11:47 AM
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပြင်သွားတိုင်း ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ အလှဆုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ မိတ်ကပ်၊ အဝတ်အစားနဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်က အရေးအကြီးဆုံးတွေပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာ ပထမဆုံး သတိထားမိစေမယ့် ကိုယ့်မျက်နှာပြင်ဆင်မှုက ညီညာပြေပြစ်နေမှ ပိုယုံကြည်မှုရှိစေမှာပါ။
အဲ့လိုဆိုတော့လည်း မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုကအရေးပါနေပြန်ရောလေ။ ဒါဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာမှာ အခရာကျတဲ့ အခြေခံ Foundation ကို ဘယ်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးလိမ်းတာက ပိုစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လွယ်ပြီး တာရှည်ခံလဲဆိုတာ သိထားသင့်ဖို့လိုလာပါပြီ။
လတ်တလောမိန်းကလေးအများစု မိတ်ကပ် Foundation လိမ်းခြယ်ရာမှာ အသုံးပြုကြတာကတော့ ဥလို့ လူအများသိကြတဲ့ Make up Sponge နဲ့ Make up Brush တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်တစ်ခုနဲ့ လိမ်းတာက ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ပိုကိုက်ညီမလဲဆိုတာ သေချာအဖြေရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
Sponge Vs Make up Brush
Sponge နဲ့ Make up Brush ဘယ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရတာ ပိုအဆင်ပြေလဲ မသုံးသပ်ခင် ဘယ်ပစ္စည်းကို ကိုယ်လက်ရှိ အသုံးပြုနေပြီး ဘယ်လို Result တွေရလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ချောမွေ့ပြေပြစ်တဲ့ မိတ်ကပ်သားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ Sponge က ပိုအဆင်ပြေ ပိုမိုသိပ်ပြီး အနာအဆာအပြည့်အဝဖုံးပေးနိုင်မယ့်သွင်ပြင်မျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ Make up brush တွေက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ မိတ်ကပ်ပညာရှင် Abraham Sprinkle ကပြောခဲ့ပါတယ်။
Powder-based ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Blushes တွေ၊ Setting Powders တွေ၊ Highlighters တွေကိုသုံးတဲ့နေရာမှာတော့ Brush တွေသုံးတာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီလို Brush တွေက မျက်နှာပေါ် ကိုယ်လိုသလောက်ပမာဏပဲ တင်ကျန်စေပြီး အဆုံးသတ်ရင်တော့ Sponge လေးနဲ့ သိပ်သိပ်ပြီး မိတ်ကပ်သား ပိုမိုသေသပ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
Cream Contouring တွေသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ Sponge က မရှိမဖြစ် သုံးရမယ့်အရာပါ။ Make up Sponge ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုက မိတ်ကပ်သားကို အရေပြား အတွင်းထဲထိစိမ့်ဝင်စေပြီး အရေးအကြောင်းမထင်တဲ့အလှကို ရစေမှာပါ။
ဒီ ၂မျိုးထဲနဲ့ပဲ သုံးရမှာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မိရိုးဖလာလွယ်ကူမြန်ဆန်နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ လက်နဲ့လိမ်းခြယ်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Liquid နဲ့ Cream Foundation တွေလိမ်းရာမှာတော့ လက်ကိုအသုံးပြုတာထက် Brush တို့ Sponge တို့က ပိုမိုသပ်ရပ်သိပ်သည်းတဲ့ မိတ်ကပ်သားနဲ့ တစ်နေ့တာ ပိုမိုတာရှည်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆိုးကျိုးကတော့ အသီးသီးရှိတာပါပဲ။ Brush တွေကတော့ ဆေးရလွယ်ကူပေမယ့် အသားထဲထိစိမ့်ဝင်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ Sponge တွေကျတော့ အသားထဲစိမ့်ဝင်ပေမယ့် သိမ်းဆည်းရ၊ ဆေးရတာ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ပြီးတော့ မိတ်ကပ်သားကိုပိုစုပ်တဲ့အတွက် မိတ်ကပ်သားပိုကုန်ပါတယ်။
ဒီတော့ Sponge နဲ့ Make up brush ရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို သိပြီဆိုတော့ ဘယ်မိတ်ကပ် Foundation နဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနဲ့က ပိုသင့်တော်မလဲဆိုတာ ရွေးချယ်လိမ်းကျံနိုင်ပါပြီနော်။
Make Up လိမျးဖို့ Brush နဲ့ Sponge(ဥ) ဘယျတဈခုက ပိုအသငျ့တျောဆုံးလဲ?
မိနျးကလေးတဈယောကျ အပွငျသှားတိုငျး ယုံကွညျမှုရှိစဖေို့ အလှဆုံးပံ့ပိုးပေးတဲ့အစိတျအပိုငျးတှထေဲမှာ မိတျကပျ၊ အဝတျအစားနဲ့ ဆံပငျစတိုငျလျက အရေးအကွီးဆုံးတှပေါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှ လူအမြားနဲ့ ဆကျဆံပွောဆိုရမှာ ပထမဆုံး သတိထားမိစမေယျ့ ကိုယျ့မကျြနှာပွငျဆငျမှုက ညီညာပွပွေဈနမှေ ပိုယုံကွညျမှုရှိစမှောပါ။
အဲ့လိုဆိုတော့လညျး မိတျကပျပွငျဆငျမှုကအရေးပါနပွေနျရောလေ။ ဒါဆိုရငျတော့ မိတျကပျလိမျးခွယျရာမှာ အခရာကတြဲ့ အခွခေံ Foundation ကို ဘယျပစ်စညျးတှသေုံးပွီးလိမျးတာက ပိုစိမျ့ဝငျပြံ့နှံ့လှယျပွီး တာရှညျခံလဲဆိုတာ သိထားသငျ့ဖို့လိုလာပါပွီ။
လတျတလောမိနျးကလေးအမြားစု မိတျကပျ Foundation လိမျးခွယျရာမှာ အသုံးပွုကွတာကတော့ ဥလို့ လူအမြားသိကွတဲ့ Make up Sponge နဲ့ Make up Brush တှပေဲဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ ဘယျတဈခုနဲ့ လိမျးတာက ဘယျလိုအခွအေနတှေမှော ပိုကိုကျညီမလဲဆိုတာ သခြောအဖွရှောကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…
Sponge နဲ့ Make up Brush ဘယျပစ်စညျးကို အသုံးပွုရတာ ပိုအဆငျပွလေဲ မသုံးသပျခငျ ဘယျပစ်စညျးကို ကိုယျလကျရှိ အသုံးပွုနပွေီး ဘယျလို Result တှရေလဲဆိုတာ သိထားသငျ့ပါတယျ။ အမှနျတော့ ခြောမှပွေ့ပွေဈတဲ့ မိတျကပျသားကို ပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာဆိုရငျတော့ Sponge က ပိုအဆငျပွေ ပိုမိုသိပျပွီး အနာအဆာအပွညျ့အဝဖုံးပေးနိုငျမယျ့သှငျပွငျမြိုးအတှကျဆိုရငျတော့ Make up brush တှကေ ပိုအဆငျပွပေါတယျလို့ မိတျကပျပညာရှငျ Abraham Sprinkle ကပွောခဲ့ပါတယျ။
Powder-based ပစ်စညျးတှဖွေဈတဲ့ Blushes တှေ၊ Setting Powders တှေ၊ Highlighters တှကေိုသုံးတဲ့နရောမှာတော့ Brush တှသေုံးတာကပိုအဆငျပွပေါတယျ။ ဒီလို Brush တှကေ မကျြနှာပျေါ ကိုယျလိုသလောကျပမာဏပဲ တငျကနျြစပွေီး အဆုံးသတျရငျတော့ Sponge လေးနဲ့ သိပျသိပျပွီး မိတျကပျသား ပိုမိုသသေပျအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။
Cream Contouring တှသေုံးတော့မယျဆိုရငျတော့ Sponge က မရှိမဖွဈ သုံးရမယျ့အရာပါ။ Make up Sponge ကောငျးကောငျးလေးတဈခုက မိတျကပျသားကို အရပွေား အတှငျးထဲထိစိမျ့ဝငျစပွေီး အရေးအကွောငျးမထငျတဲ့အလှကို ရစမှောပါ။
ဒီ ၂မြိုးထဲနဲ့ပဲ သုံးရမှာလားဆိုတော့လညျး မဟုတျပါဘူး။ မိရိုးဖလာလှယျကူမွနျဆနျနညျးလမျးဖွဈတဲ့ လကျနဲ့လိမျးခွယျလညျး ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Liquid နဲ့ Cream Foundation တှလေိမျးရာမှာတော့ လကျကိုအသုံးပွုတာထကျ Brush တို့ Sponge တို့က ပိုမိုသပျရပျသိပျသညျးတဲ့ မိတျကပျသားနဲ့ တဈနတေ့ာ ပိုမိုတာရှညျခံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဆိုးကြိုးကတော့ အသီးသီးရှိတာပါပဲ။ Brush တှကေတော့ ဆေးရလှယျကူပမေယျ့ အသားထဲထိစိမျ့ဝငျဖို့ခဲယဉျးပါတယျ။ Sponge တှကေတြော့ အသားထဲစိမျ့ဝငျပမေယျ့ သိမျးဆညျးရ၊ ဆေးရတာ အခြိနျပေးရပါတယျ။ ပွီးတော့ မိတျကပျသားကိုပိုစုပျတဲ့အတှကျ မိတျကပျသားပိုကုနျပါတယျ။
ဒီတော့ Sponge နဲ့ Make up brush ရဲ့ ကောငျးကြိုးနဲ့ဆိုးကြိုးတှကေို သိပွီဆိုတော့ ဘယျမိတျကပျ Foundation နဲ့ ဘယျပစ်စညျးအမြိုးအစားနဲ့က ပိုသငျ့တျောမလဲဆိုတာ ရှေးခယျြလိမျးကြံနိုငျပါပွီနျော။
by Naing Linn .5days ago